Nanao Fihetsiketsehana Nandritra Ny Andro Maromaro Ny Tanàna Amazoniana Ao Pucallpa, Saingy Tsy Mba Nilaza Momba Izany Ny Fampahalalam-baovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Avrily 2016 4:33 GMT
Andro fahaefatra amin'ny fitokonana lavareny ao Pucallpa. Saripika nozaraina ao amin'ny Twitter avy amin'i @carlos1cd.
Ity lahatsoratra ity dia navoakan'i Juan Arellano voalohany tao amin'ny blaogy Globalizado.
Voahozongozon'ny fitokonam-paritra nanomboka tamin'ny 9 marsa 2016 lasa teo ny fitoniana mahazatra ao an-tanàna amazoniana Pucallpa, ao amin'ny faritra Uyacali ao avaratra atsinanan'i Però. Na izany aza dia tsy mahalala momba izany loatra ny ao Lima renivohitra. Angamba izany vokatry ny hazakazaka fifidianana ho filoha mizotra ao amin'ny firenena, izay ifantohan'ny fampitam-baovao tanteraka.
Ny El Frente de Defensa de Ucayali (Ny Ligim-piarovana an'i Ucayali) no fikambanana ao ambadik'ity fitokonana faobe, izay nahazo ny sarangan'olona isan-karazany. Mitaky ny fampihenana ny vidin'ny herinjiro, etona, solika ary ny fanadiovana fako. Mitaky ny famerenana ny fampihenana natao tamin'ny teti-bolan'ny faritra, faritany sy ny distrika; sy vahaolana ho an'ny olan'ny fananan-tany sy ny tolotra ho an'ny fanorenam-ponenana tsy ara-dalàna ao amin'ny faritra ihany koa izy ireo
Nahazo fanohanana goavana tao an-tanàna ny fitokonana, ary nanatevin-daharana izany ihany koa ny sasany tamin'ireo faritany manodidina. Olona iray no naratra tamin'ny andro voalohan'ny fitokonana tsy voafetra, izay nahitana fihetsiketsehana goavana. Araka ny filazan'ireo nahita maso, vokatry ny bala fingotra notifirin'ny polisy no nahatonga ratra. Nitohy nandritra ny andro faharoa sy fahatelo misesy ny fihetsiketsehana ary nitarika fisamborana mpanao fihetsiketsehana 21. Tamin'ny andro fahefatra, vondrom-piarahamonina vazimba teratany 15 no nanatevin-daharana ny fitokonana. Ankoatra izany, nanomboka nisy fiantraikany tamin'ny tsy fahampian'ny sakafo fototra hatrany ny fikatonan'ny orinasa sy ny sakan-dalana, nanery ireo mponina sasany mba hamorona lakozia iombonana.
#Pucallpa manoma-tena amin'ny fitokonana rahampitso. pic.twitter.com/BzfYuoTSy1
Nanomboka tao #Pucallpa ny fitokonana.
#HuelgaUcayalina mitohy ny fitokonanana mitaky ny governemanta mba hamaly ny fitakian'izy ireo
Lalana nosakanan'ny fiarovana #Ucayalazo#Pucallpa, tsy amidy i Pucallpa
@VeroLinaresC Verito, toy izao no mitranga ao Pucallpa. Efa andro fahaefatra sahady ny fitokonana.
#Ucayalazo andro faha-4
#ucayalazo!!! Mitolona i Pucallpa
Misy mihitsy aza ny tsaho fa olona roa no namoy ny ainy nandritra ny fifandonana tamin'ny polisy, na izany aza, mbola tsy voamarina izany.